Home Wararka Mudane Mahdii Guled Gabaraha Cusub ee Somaliya. Akhriso
Mudane Mahdii Guled Gabaraha Cusub ee Somaliya. Akhriso
RW/K/Xigeenka dalka waa nin gashada shaatiyo noocyo badan waana shakhsi kolba u dhaqaaqa halka ay dantiisu ku jirto.Min Jigjiga, Hargeysa haddana Xamar. Inkastoo uu yahay shakhsi ay qoys Somaliyeed dhaleen haddana waa ruux ku barbaaray Xarshin, una soo shaqeeyey talisyadii kala dambeeyey dalka Itoobiya ka hana qaaday. Mahdi Guuled waxaa uu haystaa dhalasho Itoobiyaan ah wuxuuna hadda u qeylinayaa in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah isaga oo aan kala jecleyn inay dhacdo doorasho iyo in kale. Sababtoo ah haddii doorasho qof iyo cod ahi dhacdo kursigiisa ma geyn karo Hargeysa ama Burco ee waxaa uu rabaa in lagu doorto kursigiisa Xamar, iyadoo uu is leeyahay nabad iyo nolol ayaa kuu xajiineyso mar haddii ay xoogga Waddaniyiinta-Guulwadayaasha cusub- wax dooranayaan.
Mahdi Waxaa xafiisyada dowladda looga yaqaannaa inuu yahay nin u adeega Itoobiya oo xogaha siiya waxaana ay dhowr jeer isku dhaceen MW Farmajo oo sida la sheegay uu farriimo ka hormariyey isagoo Farmajo uu is lahaa warkaan adiga kaliya ayaa ah gacanta koowaad ee Dr Abiy la wadaagta, hasa yeeshee markii uu u tagay uu ogaaday in wark laga soo hormariyey.
Dowladihii hore waxaa lagu xaman jiray in uu ku dhex jiro Gabre, hasa yeeshee hadda Gabre looma baahna oo waxaa jooga Somali howshii Gabra lagu xaman jiray qabta, waliba Gabra waxay iska ahayd xan iwm laakiin hadda waxaa xogta bixiya rag heli kara oo aysan jirin cid kula xisaabtanta maadaama MW Farmajo laga maqlay tiro aad u badan isagoo ku leh Abiy Axmed “my BaRRada”.
Dhinaca kale Mahdi iyo kooxdiisa waxaa laga hayaa iyagoo leh waan oganahay inaan qof iyo cod la gaareyn laakiin waxaan rabnaa inaan hello muddo kororsi, dadkana aan u sheegno waan rabnay, waana ku dadaalnay laakiin lama gari karo oo hawshu waxay ahayd qowda maqashii waxna ha u qaban.
Haddaba shacbiga Somaliyeed waa inayan ku sirmin, isla markaana la yaabin haddallada caqliga ka fog ee ku hadaaqayo Mahdi maadaama uusan daacad u ahan dalkaan walina uu u tirsan dalkii uu ka yimid ee Itoobiya. Mahdi waa ninkii soo saxeexay dib u dhigista Dacwaddii Badda oo muuqat mid la eedi doono.
Wali lama arag Mahadi oo ka hadlaya dhibatada ay dowladda uu ka tirsan yahay ku sameysay degaannada uu ku matalo dowladda, waxaa la soo jeediyey isagoo fadhiya in laga jaro lacagaha kabka ah ee la siiyo Soomaliland, hasa yeeshee kama damqan, waayo isumaba haysto inuu ka wakiil yahay, waxaasa la yaabi lahaa tan uu dhigi lahaa haddii Itoobiya wax laga sheegi lahaa.
Ugu dambeyn haddalada daneysan ee afkiisa ka soo baxaya yaan lagu macneyn xafiiska sharafta leh oo uu hayo ee RW/K/Jamhuuriyadda Federaalka, inkastoo ay hadda Fowzia Xaji Aden dagaal ugu jirto sidii ay uga kacsan lahayd oo ay tuf iyo duco uga heli lahayd Farmajo, Fahad iyo Kheyre oo isna xelligaan u muuqda mid ka sii falliirmaya NN caqliyari, dabbaalnimo ama raganimo aqoon ku dhisan oo caqliyeysaan middey tahayba.
Haddaba Mahdi Guuled waa Gabaraha Cusub oo calanka hoos harsanaya awoodna u leh inuu helo xog kasta oo uusan Gabra heli jirin.